गित/संगीत « रंग खबर
पुष्पाको ‘सम्बन्ध’ सार्वजनिक | दुई सँस्थालाई मोडल भिमेसन कँडेलको सहयोग
रंग खबर, काठमाण्डौ । गायिका पुष्पा सुब्बाको दोस्रो एल्बम ‘सम्बन्ध’ विहिबार राजधानिमा एक कार्यत्रमबीच सार्वजनिक गरिएको छ । प्रमुख अतिथि गायिका संगीता राना र रंग पत्रकार कृष्ण भट्टराईले संयुक्त रुपमा
यस्तो रहेछ आर्यन सिग्देलको ‘टेम्पोररी माया’ (हेर्नुस् भिडियो)
रंग खबर, काठमाण्डौं । संगीतकार बसन्त सापकोटाले गाएको फिल्म ‘सुश्री’ को ‘टेम्पोररी माया’ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा फिल्मका अभिनेता आर्यन सिग्देल र अभिनेत्री आशिका तामाङ फिचरिङमा छन् । फिल्म
यस्तो भयो तीज म्यूजिक अवार्ड (फोटोफिचर र भिडियोसहित)
रंग खबर, काठमाण्डौं । छायाँ छवि क्रियशनको आयोजनामा शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न दोस्रो संस्करणको तीज म्युजिक अवार्डमा उत्कृष्ट तीज दोहोरी गायिकाको अवार्ड गायिका टिका पुनले उचालिन्। गायक तर्फ ‘सेल्फी सेल्फी’का गायक वसन्त
अमेरिका बस्ने गायक मुरारीले ल्याए ‘अनामिका’
रंग खबर, काठमाण्डौं । प्रवासमा रहेर नेपाली संगितलाई माया गर्ने नेपालीहरु धेरै छन् । नेपाली संगितकै क्षेत्रमा लागिरहेका थुप्रै छन् । यही सुचीमा पर्छन्, गायक मुरारी भट्टराई । अमेरिकास्थित क्यालिफोर्नियामा
‘पलमै हसायौँ, पलमै रुवायौँ’ मा आशिष्मा र निराजन
धेरै रुचाइएको गीत हो यो । फिल्म ‘कहाँ छौ कहाँ’ मा समावेश यो गीतलाई गायक महेश थुलुङोले गाएका हुन् । यही गीतबाट पाश्र्व गायनमा चर्चा कमाएका महेश ‘मोमेन्ट’ एल्बम ल्याउने
वरिष्ठ गायक प्रेमध्वज प्रधानलाई ‘स्वामी नारायणाचार्य श्रुति अभिनन्दन’
रंग खबर, काठमाण्डौं । श्रुति सङ्गीत विद्यालयले १२ औं वर्ष प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा स्रष्टा अभिनन्दन तथा सम्मान गरेको छ । शनिवार राजधानीको नेपाल पर्यटन बोर्ड भृकुटीमण्डपमा आयोजित कार्यक्रमा संस्कृतिविद् सत्यमोहन
भुकम्प पीडितको सहयोगार्थ पोखरा पुग्यो ‘आवाज’ यात्रा
रंग खबर, काठमाण्डौं । भुकम्प पीडितको सहयोगार्थ बुद्धकुमारी फाउन्डेशनले शुरु गरेको आवाज सांगितीक यात्रा पोखरामा पुगेको छ । पोखरास्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा फाउन्डेशनले शनिवार भब्य कन्सर्ट गर्ने भएको छ । कन्सर्टमा कभवेभ
गुञ्जनमा गुञ्जियो ‘लामो कालो केश’ (भिडियोसहित)
लामो कालो केश तिम्रो छोइदिउ जस्तो लाग्छ पलपलको दुःखमा तिम्रो रोइदिउ जस्तो लाग्छ… रंग पत्रकार अनिल यादवले लेखेको यो गजल गीत बनेको छ । राजधानीस्थित अनामनगरमा रहेको गुञ्जन रेकर्डिङ स्टुडियोभित्र
मनीको माया अनुले साँचेर राख्ने ! (भिडियो हेर्नुस्)
रंग खबर, काठमाण्डौं । मोडल मनी चाम्लिङको सोलो अभिनय रहेको एल्बम ‘अर्को पाइला’ मा समावेश ‘साँची राखौँला’ बोलको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । पेसल राईको शब्द र विनोद खम्बुको संगीत
भूकम्पपीडितको सहयोगार्थ बुद्ध कुमारीको ‘आवाज’ यात्रा (फोटोफिचरसहित)
–कमल प्रसाई (तस्विरसहित) सडक बालबालिकाहरुको हकमा काम गर्दै आएको बुद्ध कुमारी फाउण्डेशनले भूकम्पपीडितको सहयोगार्थ अभियान थालेको छ । सिन्धुपाल्चोकस्थित हाइबुङबासीका भूकम्प पीडितको सहयोगार्थ सांगीतिक यात्रा शुरु गरेको हो । शनिवार
केकीले हात झिकेपछि ‘विच्छेद’मा लक्ष्मीको इन्ट्री
‘डुप्लिकेट माया’मा नाजिर, आँचल र सागरको ओर्जिनल ठुम्का ~ भिडियो ~
संचारकर्मी शारदाले ल्याइन ‘तीजको लहर’ ~ भिडियो ~
All Rights Reserved. ©2020 रंग खबर By appharu.com